गोंगबुको बिच सडकमा सोमवार विहानै देखियो अनौठो दृष्य, प्रहरी पनि चकित् – Gorkhali Dainik
गोंगबुको बिच सडकमा सोमवार विहानै देखियो अनौठो दृष्य, प्रहरी पनि चकित्
March 22, 2021 207
काठमाडौंको गोंगबुमा सार्वजनिक बस चालकहरुले सडकमै बस तेर्सो पारेर अनौठो विरोध गरेका छन् । सोमबार एका विहानै सडकमा तेर्सो पारेर बस सडकमा राखेपछि यात्रु पनि छक्क परे । गोंगबुस्थित बसपार्कअगाडि रिङरोडमा ट्राफिक प्रहरीले यात्रुबहाक बसलाई रोकेर कारवाही गरेपछि चालकले यस्तो हर्कत गरेका हुन् ।
गल्ती नगर्दा पनि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना तिराएको भन्दै चालकहरु एक जुट भए । उनीहरुले सडक नै अवरुद्ध हुने गरी सडकमा बस तेर्सो पारेर राखे । एक जना बस चालकले सुरु गरेको त्यो अभियानमा अरु बस चालकहरु पनि थपिए । यात्रुसँग बढी भाडा लिएको गुनासोपछि बसका चालकलाई पहिचान गरेर जरिवाना लिन खोज्दा चालहरु त्यस्तो हर्कतमा उत्रिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ ।
उनीहरूले सडकमै बस तेर्साएर राखेपछि सोमबार बिहान १० बजेपछि करिब १५ मिनेट गोंगबुस्थित सडक अस्तब्यस्त भएको थियो । त्यसबेला रिङरोड भएर गुड्ने सवारी साधन चल्न सकेका थिएनन्। सडक अवरोध खुलाउन प्रहरी परिचालन गर्नु परेको थियो।
प्रहरीले केही बेरमै अवस्था नियन्त्रणमा लिएको हो । नेपालगन्जवाट एक जनाले सामान पठाउँदा चालकले ५ सय रुपैया लिएको गुनासो प्रहरीलाई पुगेको थियो । त्यही गुनासोका आधारमा प्रहरीले कारवाही गरेको थियो । ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक शंकर श्रेष्ठका अनुसार बसका चालकले सामान ल्याएवापत पाँच सय रूपैयाँ लिएको गुनासो आएको थियो।
नेपालगञ्ज-काठमाडौं रूटको ना ५ ख २२८६ नम्बरको बसमा एक व्यक्तिले सामान पठाएका थिए। गत चैत २ मा सामान पठाउँदा उक्त बसका चालकले बढी पैसा लिएको गुनासो थियो।
‘बसका चालकलाई एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना लाग्ने यातायातको दफाअनुसार कारवाही गरिए पछि चालकहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
Prevलकडाउन–२ कमिङ सून… कहिले देखि हुन्छ लकडाउन ?
Nextरात्री बसलाई ट्राफिकले १० हजारको चिट काटेपछि व्यवसायीद्वारा रिङ्गरोड बन्द
दुखद खबर : दाङमा स्कुल बस दुर्घटना २ जनाको मृ्त्य, अन्य धेरै घाईते
आफ्नै भाईद्वारा पत्रकार माथी ह’म्मर आ.क्रमण,
माओवादीले सांसदबाट पदमुक्त गरेपछि मन्त्रीहरु प्रचण्डमाथि खनिए , यति सम्म भन्न भ्याए !
हार्दिक बधाई : रेखा थापाले यि हेण्डसम युवक संग लगनगाठोँ कस्दैँ ? (1766)